Samaritan စူပါဟီးရိုး ဒရာမာရုပ်ရှင်မှာ ပါဝင်လာမယ့် မင်းသားကြီး စတားလုံး - Yangon Media Group
Samaritan စူပါဟီးရိုး ဒရာမာရုပ်ရှင်မှာ ပါဝင်လာမယ့် မင်းသားကြီး စတားလုံး
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂
MGM ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးသည် မင်းသားကြီး ဆေဗက်စတာ စတားလုံး၏ Balboa Productions ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ မင်းသားကြီး ကိုယ်တိုင်ပါဝင်သရုပ် ဆောင်၊ ထုတ်လုပ်မည့် Samaritan အမည်ရှိ စူပါဟီးရိုးရုပ်ရှင်ကို ဖန်တီးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ စတူဒီယိုသည် စစ်ပွဲအပြီး၌ နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကြာ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့သော စူပါဟီးရိုးတစ်ဦးအကြောင်းကို လေ့လာခဲ့သည့် ယောက်ျားလေးတစ်ဦးအကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်တည်ထားသည်။ MGM က ယင်းရုပ်ရှင်ကို Balboa မှ မင်းသားကြီး စတားလုံး၊ ဘရာဒန်အာဖာတာဂွဒ်တို့နှင့်အတူ ပူးတွဲထုတ်လုပ်မည် ဖြစ်သည်။ နာမည်ကျော် ပရိုဂျူဆာ စကတ်ခ်ျက အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
မင်းသားကြီးစတားလုံးသည် ပြီးခဲ့သည့်မေလတွင် Balboa Productions ထုတ်လုပ်ရေးကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံးအနေဖြင့် လက်ဝှေ့သမား ဂျက်ဂျွန်ဆန်၏အကြောင်း ရိုက်ကူးထားသည့် ရုပ်ရှင်ကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ လက်ဝှေ့သမား ဂျွန်ဆန်သည် ပထမဆုံး အာဖရိကနွယ် ဖွားအမေရိကန် ဟဲဗီးဝိတ်ချန်ပီယံ ဖြစ်သည်။
မင်းသားကြီးစတားလုံးသည် MGM နှင့်အတူ “Rocky” ရုပ်ရှင်နှင့် “Creed” ဇာတ်ကောင်ခွဲ ထွက်ရုပ်ရှင်တို့တွင် လက်တွဲ ရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်။ “Creed” ခွဲထွက်ရုပ်ရှင်တွင် မင်းသား မိုက်ကယ်ဘီဂျော်ဒန် နှင့်အတူ ပါဝင်ခဲ့သည်။ Rocky ရုပ်ရှင်ထဲမှ ဇာတ်ကောင်များကို အခြေခံထားပြီး မင်းသား ကြီးစတားလုံးကိုယ်တိုင်ဇာတ်ညွှန်းရေးထားသည့် မူရင်းဇာတ်ညွှန်းကို စတီဗင်ကပလာဂျူနီယာက ရိုက် ကူးခဲ့သည်။
ပရိုဂျူဆာ စကတ်ခ်ျသည် ဆိုနီကုမ္ပဏီ၏ သည်းထိတ်ရင်ဖိုရုပ်ရှင် “Escape Room” ရုပ်ရှင်ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ရုံဝင်ငွေဒေါ်လာ ၁၁၅သန်းကျော်ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Verve, Realm Management နှင့် Eclipse Law Corporation တို့၏ ကိုယ်စားလှယ်လည်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အနေနဲ့လည်း ပါတီတစ်ရပ် ထူထောင်တဲ့ နေရာမှာ သတိပြုဆင်ခြင်ရမ
ဂျော့ခ်ျကလူးနေးတို့ စုံတွဲစီစဉ်ပေးတဲ့ သီးသန့် ဂျက်လေယာဉ်နဲ့ အင်္ဂလန်ကို ပြန်ခဲ့တဲ့ မီဂန်မာ?
ငါန်းဇွန်မြို့နယ်တွင် ဆေးခြောက်ဧက ၂ဝ ကျော် စိုက်ပျိုးထားသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံသား တစ်ဦးနှ??
အေစီမီလန် အသင်းကို ဂတ်တူဆို လမ်းကြောင်းမှန်ရောက်ရန် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မည် ဟု မွန်တဲလား ယံ??
လျှို့ဝှက် မင်္ဂလာပွဲကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ Millie Mackintosh